Zvigadzirwa Vagadziri - China Zvigadzirwa fekitori & vatengesi
Maternal & Fetal yekutarisa
Yedu inoraswa inopinda yekudyisa seti ine mhando ina dzekusiyana kwakasiyana kwegadziriro.
Kana gadziriro yezvokudya yakaiswa muhombodo kana poda yakakanyiwa, mabhegi seti achasarudzwa. Kana akaiswa muhombodo / akabhegi akajairwa emvura kugadzirira kwekuvaka, spike seti ichasarudzwa.
Pump seti inogona kushandiswa mune akawanda akasiyana mabrandi eEnteral yekudyisa pombi.
1. Dhizaini yeiyo Delta bapiro chimiro inoderedza kukakavara kana yaiswa pamuviri wemurwere. Zvinoita kuti murwere anzwe kusununguka zvakanyanya. Iyo yakachengeteka uye yakavimbika.
2.Shandisa giredhi rekurapa PU zvinhu izvo zvinonyanya kushandiswa kumuviri wemunhu kugara mukati. Iyo ine yakanakisa biocompatibility uye makemikari kugadzikana, pamwe nepamusoro elasticity. Izvo zvinhu zvinozozvinyorovera zvoga otomatiki kudzivirira iyo yemasuru tishu pasi pekupisa kwemuviri.
• PICC Mutsara
• Catheter Kudzikamisa Mudziyo
Ruzivo rweKushandisa (IFU)
• IV Catheter w / Tsono
• Scalpel, chengetedzo
Inoraswa bhegi rekumisikidza rezvibereko zvevabereki (pano inonzi TPN bhegi), inokodzera varwere vanoda kurapwa kwevabereki.
Yakajairwa: ECG, Kufema, NIBP, SpO2, Pulse Rate, Kupisa-1
Inesarudzo: Nellcor SpO2, EtCO2, IBP-1/2, Bata skrini, Thermal Recorder, Wall mount, Trolley, Central chiteshi，HDMI，Kupisa-2
Yakajairwa: SpO2, MHR, NIBP, TEMP, ECG, RESP, TOCO, FHR, FM
Inesarudzo: Twin Kuongorora, FAS (Fetal Acoustic Simulator)
Chigadzirwa Chigadzirwa 3 Chiteshi ECG 3 chiteshi ECG muchina nekududzira tekinoroji uye dhizaini dhizaini kugadzirisa Baseline kudzikamisa kuongorora Kwakazara alphanumeric silicon keyboard Tsigira U disk chengetedzo 6 Chiteshi ECG 6 chiteshi ECG muchina ine dudziro 5.0 ”...
Yakajairwa: Raibhurari yezvinodhaka, Nhoroondo rekodhi, Heating basa, Drip detector, Remote control
Chigadzirwa Chigadzirwa √ 4.3 ”Ruvara rwechikamu LCD skrini, backlight kuratidza, inogona kushandiswa mune akasiyana mamiriro emwenje Kurema kwemuviri, chiyero cheDrug uye huwandu hwemvura
Chigadzirwa Chigadzirwa chibvumirano chakanaka nechinhu chega chega chekubatanidza Strong adaptability: Inogona kushandiswa nemhando dzakasiyana siyana, uye kune zvakawanda zvekusarudzika accessories: bhodhoro pini, tsvina mvura yekuunganidza bhegi, negativ ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Zvakachengeteka zvinhu ● Kurapa PP zvinhu ● Kwakanaka biocompatibility Kuvimbika kuita. Kunyatso disinfection ● Deredza mwero weCRBSl Nyore mashandiro ● Kuvandudza kushanda kwevanamukoti International standard dhizaini yeLuer chinongedzo, inokodzera infusion chinongedzo kutaurwa kwemhando mikuru Midziyo Inokodzera Luer connector mune dzakasiyana infusion chiteshi, kusanganisira IV cannula, Tsono fre ...
Chii chinonzi kurapwa 3 nzira stopcocks
Iyo yekurapa 3 nzira stopcock yatinowanzo taura ndiyo inowanzo shandiswa yekubatanidza chishandiso mukuendesa chiteshi munzvimbo yekurapa, iyo inonyanya kushandiswa kutakura zvinwiwa. Kune akawanda marudzi emawere ekurapa uye anoshandiswa zvakanyanya. Iyo inoraswa yeplastiki tees inoumbwa nechikamu chikuru chakagadzirwa nezve epurasitiki zvinhu uye matatu vharuvhu switch zvikamu zvakagadzirwa nerabha zvinhu.